लूका २ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२ ती दिनमा सबैलाई आ-आफ्नो नाम दर्ता गराउन सम्राट्* अगस्टसले सारा पृथ्वीभरि उर्दी जारी गरे। २ (यो पहिलो दर्ता क्युरिनियस सिरियाको राज्यपाल छँदा भएको थियो।) ३ त्यसैले नाम दर्ता गराउन सबै मानिसहरू आ-आफ्नो सहरमा गए। ४ यूसुफ दाऊदकै घराना अनि वंशका थिए। त्यसैले गालीलको नासरत सहरबाट निस्केर यहूदियामा पर्ने बेतलेहेम भनिने दाऊदको सहरमा तिनी पनि ५ मरियमसित नाम दर्ता गराउन गए। उनी त्यतिखेर तिनकी पत्नी भइसकेकी थिइन्‌ र दुई जीउकी थिइन्‌। ६ तिनीहरू त्यहीं छँदा उनको बच्चा जन्माउने बेला भयो। ७ अनि उनले एउटा छोरो, आफ्नो जेठो सन्तानलाई जन्म दिइन्‌। उनले तिनलाई कपडाले बेरेर डुँडमा राखिन्‌, किनकि तिनीहरूले पौवामा बास पाउन सकेनन्‌। ८ त्यतिखेर त्यही इलाकामा गोठालाहरू बाहिर चौरमा बसेर रातभरि आफ्नो बगालको सुरक्षा गरिरहेका थिए। ९ तब अचानक यहोवाको स्वर्गदूत तिनीहरूकहाँ देखा परे अनि तिनीहरूको चारैतिर यहोवाको गौरव चम्कियो। यो देखेर तिनीहरू असाध्यै डराए। १० तर स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई यसो भने: “नडराओ, किनकि हेर म सबै मानिसहरूलाई असाध्यै आनन्दित बनाउने सुसमाचार तिमीहरूलाई सुनाउँदैछु। ११ किनकि दाऊदको सहरमा आज तिमीहरूको उद्धारक, ख्रीष्ट* प्रभुको जन्म भएको छ। १२ अनि तिमीहरूले उहाँलाई यसरी चिन्नेछौ: तिमीहरूले एउटा शिशुलाई कपडाले बेरेको र डुँडमा राखेको भेट्टाउनेछौ।” १३ तब स्वर्गबाट आएको एउटा ठूलो पल्टन ती स्वर्गदूतसँगै अचानक देखा पऱ्यो अनि तिनीहरूले यसो भन्दै परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थाले: १४ “स्वर्गमा परमेश्वरको महिमा होस् अनि पृथ्वीमा उहाँको निगाह पाएका मानिसहरूलाई शान्ति।” १५ स्वर्गदूतहरू तिनीहरूलाई छोडेर स्वर्गतिर गइसकेपछि ती गोठालाहरूले आपसमा यसो भन्न थाले: “आओ, हामी तुरुन्तै बेतलेहेम जाऔं अनि यहोवाले हामीलाई भन्नुभएबमोजिम त्यहाँ के-के भएछ, गएर हेरौं।” १६ तिनीहरू हतारिंदै गए र मरियमका साथै यूसुफलाई भेट्टाए अनि शिशुलाई चाहिं डुँडमा सुतिरहेको पाए। १७ शिशुलाई देखेपछि, त्यस सानो बालकबारे स्वर्गदूतले भनेका सबै कुरा उनीहरूलाई बताइदिए। १८ अनि गोठालाहरूको कुरा सुन्नेजति सबै छक्क परे। १९ तर मरियमले भने यी सब कुरा मनमा राखिन्‌ र त्यसको अर्थ के होला भनेर मनमनै गुन्न थालिन्‌। २० तब ती गोठालाहरू फर्के अनि परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा गर्न लागे। किनकि तिनीहरूलाई जस्तो बताइएको थियो, तिनीहरूले ठीक त्यस्तै सुने अनि देखे। २१ उहाँ जन्मेको आठौं दिनमा तिनीहरूले उहाँको खतना गरे अनि उहाँको नाम येशू राखे। यो त्यही नाम थियो, जो मरियम गर्भवती हुनुअघि नै स्वर्गदूतले दिएका थिए। २२ जब मोशाको व्यवस्थाअनुसार चोख्याउने दिन पूरा भयो, तब तिनीहरूले यहोवासामु अर्पण गर्न बालकलाई यरूशलेम लगे। २३ किनकि यहोवाको व्यवस्थामा यस्तो लेखिएको छ: “हरेक जेठो छोरा यहोवाको निम्ति पवित्र ठहराइएको हुनै पर्छ।” २४ साथै, यहोवाको व्यवस्थामा भनिएअनुसार तिनीहरू यस्तो बलिदान चढाउन पनि चाहन्थे: “एक जोडी ढुकुर वा परेवाको दुई वटा बचेरा।” २५ अनि हेर, यरूशलेममा त्यतिखेर शिमियोन नाम गरेका एक जना मानिस थिए। तिनी परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्थे अनि भक्त थिए। तिनी इस्राएलले पाउने सान्त्वनाको पर्खाइमा थिए र तिनले पवित्र शक्ति पाएका थिए। २६ यसबाहेक, यहोवाले पठाउनुभएको ख्रीष्टलाई नदेखेसम्म तिनी मर्नेछैनन्‌ भनेर परमेश्वरले आफ्नो पवित्र शक्तिमार्फत तिनलाई प्रकट गर्नुभएको थियो। २७ तब पवित्र शक्तिको* निर्देशन पाएर तिनी मन्दिरमा आए अनि व्यवस्थाको रीति पूरा गर्न सानो बालक येशूका आमाबाबुले उहाँलाई ल्याउँदै गर्दा, २८ तिनले उहाँलाई आफ्नो हातमा लिए अनि यसो भन्दै परमेश्वरको प्रशंसा गरे: २९ “अब हे सार्वभौमसत्ताधारी प्रभु, आफ्नो घोषणाबमोजिम तपाईं आफ्नो दासलाई शान्तिसाथ जान दिंदै हुनुहुन्छ। ३० किनकि मेरो आँखाले उद्धार दिने तपाईंको माध्यम देखेको छ, ३१ जसलाई तपाईंले समस्त मानिसहरूको नजरसामु तयार पार्नुभएको छ, ३२ अनि जो अन्यजातिका मानिसहरूको घुम्टो हटाउने ज्योति अनि तपाईंका जन इस्राएलको गौरव हो।” ३३ बालकको विषयमा बोलिएका यी कुरा सुनेर तिनका बुबा र आमा छक्क परे। ३४ शिमियोनले तिनीहरूलाई आशिष्‌ पनि दिए तर बालककी आमा मरियमलाई चाहिं यसो भने: “हेर, यो बालक इस्राएलमा धेरै जनाको पतन अनि पुनः उत्थानको कारण बन्नेछ र घृणाको पात्र हुनेछ। ३५ (अनि जहाँसम्म तिम्रो कुरा छ, एउटा लामो तरवारले तिम्रो मुटु* वारपार हुनेगरि छेड्नेछ), ताकि धेरै जनाको मनको कुरा प्रकट होस्।” ३६ त्यहाँ हन्ना नाम गरेकी एक जना भविष्यवक्ता थिइन्‌। तिनी आशेर कुलको फनुएलकी छोरी थिइन्‌। (यी स्त्री वृद्ध भइसकेकी थिइन्‌ र कन्ने केटी छँदै विवाह गरेर आफ्नो पतिसित सात वर्षमात्र बिताउन पाएकी थिइन्‌। ३७ यी विधवा अहिले चौरासी वर्षको भइसकेकी थिइन्‌।) तिनी कहिल्यै मन्दिर छोड्दैनथिन्‌ अनि उपवास बसेर र उत्कट बिन्ती चढाएर रात-दिन पवित्र सेवा गर्थिन्‌। ३८ अनि त्यही बेला तिनी नजिक आइन्‌ र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन अनि यरूशलेमको छुटकाराको बाटो हेरिरहेका सबैलाई ती बालकको विषयमा बताउन थालिन्‌। ३९ यसप्रकार यहोवाको व्यवस्थाबमोजिम सबै काम गरिसकेपछि तिनीहरू गालीलमा आफ्नै सहर नासरत फर्के। ४० अनि सानो बालक हुर्कंदै, बलियो हुँदै र बुद्धिमान्‌ बन्दै गयो अनि परमेश्वरको अनुग्रह निरन्तर ऊमाथि रह्यो। ४१ येशूका आमाबाबु हरेक वर्ष निस्तार-चाड मनाउन यरूशलेम जाने गर्थे। ४२ उहाँ बाह्र वर्षको भएपछि, उहाँहरू आफ्नो आदतअनुसार चाड मनाउन जानुभयो ४३ अनि चाड नसिद्धिउन्जेल त्यहीं बस्नुभयो। तर घर फर्किने बेला ठिटो येशू भने यरूशलेममै रहनुभयो र उहाँका आमाबाबुलाई यो कुरा यादै भएन। ४४ तिनीहरूले उहाँ तीर्थालुहरूकै हुलमा हुनुहुन्छ होला भन्ठानेका थिए। तर एक दिनको बाटो काटिसकेपछि तिनीहरूले उहाँलाई नातागोता र चिनारुहरूको बीचमा धुँइपत्ता खोज्न थाले। ४५ त्यहाँ नभेट्टाएपछि तिनीहरू उहाँलाई खोज्दै-खोज्दै यरूशलेम पुगे। ४६ तीन दिनपछि बल्ल तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूको बीचमा बसेर सुन्दै अनि सोध्दै गरिरहनुभएको भेट्टाए। ४७ अनि उहाँको कुरा सुन्नेजति सबै उहाँको जवाफ अनि समझशक्ति देखेर छक्क परिरहेका थिए। ४८ उहाँलाई देखेर तिनीहरू पनि चकित भए र उहाँकी आमाले यसो भनिन्‌: “बाबु, तिमीले हामीलाई किन यस्तो दुःख दिएको? हेर त, तिम्रो बुबा र म तिमीलाई खोज्दा-खोज्दा कत्ति हैरान भइसक्यौं।” ४९ तर उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “तपाईंहरूले मलाई किन यताउता खोज्नुपऱ्यो? म आफ्नो बुबाको घरमा हुनुपर्छ भनेर के तपाईंहरूलाई थाह थिएन?” ५० तर उहाँले के भन्न खोज्नुभएको हो, तिनीहरूले बुझेनन्‌। ५१ त्यसपछि उहाँ तिनीहरूसितै नासरत ओर्लनुभयो र निरन्तर तिनीहरूको अधीनमा बस्नुभयो। साथै, उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा साँचेर राखिन्‌। ५२ येशू झन्‌-झन्‌ बुद्धिमान्‌ हुँदै अनि हुर्कंदै जानुभयो र उहाँमाथि परमेश्वर अनि मानिसहरूको अनुग्रह पनि बढ्दै गयो।
^ लूका २:१ * ग्रीकमा “सिजर।”
^ लूका २:११ * मत्ती १:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ लूका २:२७ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ लूका २:३५ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।